Xayiraad ma leh: Ruushku wuxuu dib u bilaabayaa duulimaadyadii buuxa ee Dominican Republic, Czech Republic iyo South Korea
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Xayiraad ma leh: Ruushku wuxuu dib u bilaabayaa duulimaadyadii buuxa ee Dominican Republic, Czech Republic iyo South Korea
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Wararka Dominican Republic • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
In kasta oo ay xannibeen dhammaan xayiraadihii, illaa hadda ma jiro shirkad diyaaradeed oo Ruush ama shisheeye ah oo soo warisay duullimaadyo dheeraad ah oo laga furay Ruushka oo loo aaday waddamadaas.
Dominican Republic, Czech Republic iyo South Korea waa saddexda dal ee ugu horreeya, kuwaas oo Ruushku si buuxda u bilaabay duulimaadyadoodii.
Duulimaadyada Prague waxaa sameeya Rossiya oo ka socota St. Petersburg, iyo Aeroflot iyo Czech Airlines oo ka socota Moscow.
Duulimaadyada Jamhuuriyadda Dominican waxaa la furay bishii Ogosto, iyada oo Azur Air kaliya ay halkaas ka samaysay duulimaadyo kiro ah.
Mas'uuliyiinta duulista rayidka ee Ruushka iyo xarunta ka-hortagga coronavirus-ka ayaa ku dhawaaqay in dhammaan xayiraadihii jiray ee duulimaadyada Dominican Republic, South Korea iyo Czech Republic la qaaday laga bilaabo Jimcaha, Ogosto 27.
Jamhuuriyadda Dominican, Czech Republic iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ah saddexda dal ee ugu horreeya, kuwaas oo Ruushku si buuxda dib ugu bilaabay duulimaadyadii tan iyo markii xayiraadaha la bilaabay in lagu soo rogo masiibada, iyada oo waddamada hadhay ay weli daboolayaan habka diyaarinta qoondada duulimaadka. Waxaa intaa dheer, xaruntu waxay go'aansatay inay kordhiso kootada duulimaadyada joogtada ah ee Masar laga bilaabo Jimcaha.
Illaa iyo hadda ma jiro diyaarad Ruush ama ajnabi ah oo soo warisay duulimaadyo dheeraad ah oo loo furay dalalkaas. Duulimaadyada Prague waxaa sameeya Rossiya ka timid St. Petersburg, iyo Aeroflot iyo Czech Airlines oo ka timid Moscow. Czech Republic ayaa wali u xiran dalxiisayaasha maadaama rakaabka kaliya ee haysta dhalashada ama oggolaanshaha joogitaanka, ama kuwa u imanaya waxbarasho ama daaweyn caafimaad ay soo geli karaan dalka.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale si buuxda ugu xiran dalxiisayaasha. Dhammaan kuwa soo galaya dalka (kaliya muwaadiniinta ama rakaabka haysta oggolaanshaha joogitaanka) ayaa laga rabaa in la karantiilo 14 maalmood. Intaa waxaa dheer, bishii Abriil ee la soo dhaafay waddanku wuxuu ka tanaasulay safarkii fiiso la’aanta ahaa ee uu la lahaa Ruushka wuxuuna joojiyay bixinta fiisooyinkii. Aeroflot oo kaliya ayaa duulimaadyo ka samaysa dalka.
Duulimaadyada Jamhuuriyadda Dominican waxaa la furay bishii Ogosto, iyada oo Azur Air kaliya ay halkaas ka samaysay duulimaadyo kiro ah. Shirkadda Aeroflot ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay xiisaynayso halka loo socdo, in kasta oo aanay shirkaddu weli shaacin wakhtiga rasmiga ah ee ay duullimaadyadu bilaaban doonaan.